नेपाली ट्रेन्डः भारत जाँदै लिंग पहिचान गर्दै ! - Bidur Khabar
नेपाली ट्रेन्डः भारत जाँदै लिंग पहिचान गर्दै !
विदुर खबर २०७४ फागुन २४ गते ११:१३
लैङ्गिक बिभेद तथा लैङ्गिक हिंसाका जति वकालत गरे पनि समाजमा छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टि एउटै भईसकेको छैन । पछिल्लो समयमा गर्भको बच्चाको लिङ्ग पहिचान गर्ने, छोरी भएमा गर्भपतन गराउने वा छोरा भए निरन्तरता दिने क्रम बढ्दो छ ।
गरिब, निमुखा तथा कमजोर बर्गका लागि यो नौलो भए पनि धनी र बौद्धिक बर्गका लागि यो सामान्य भई सकेको छ । लिंग पहिचान गराउन खोज्ने अनि छोरी भए गर्भपतन रोज्ने अधिकांश पढेलेखेका, जागिरे अनि समाजमा स्थापितहरु नै अग्रसर भएको मेरो अनुभव छ, यद्यपी यो गैरकानुनी हो ।
लिंग पहिचान गर्ने ट्रेन्ड
नेपालमा नै भिडियो एक्स रे अर्थात अल्ट्रासाउण्ड गरेर लिङ्ग पहिचान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले गर्भको बच्चा छोरा छ या छोरी पत्ता लगाउन भारतको सिलगढी, पुणिर्या, पटना, तथा गोरखपुर जाने गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा क्रोमोजोमको अध्ययनबाट गर्भको लिङ्ग पहिचान गरेको नपाईए पनि पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा पनि लुकिछिपी अल्ट्रासाउण्डबाट लिङ्ग पहिचान गरेका उदाहरणहरु प्रसस्त पाइन्छ ।
१४-१५ हप्ता अर्थात साढे तीन महिनाको गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्न सकिने रेडियोलोजिष्टहरुको भनाइ भए तापनि अधिकाशं चिकित्सकहरुले गर्भवती वा उनका आफ्न्तहरुलाई जानकारी गराउदैनन् । तर कतैकतै बढी शुल्क लिएर लिङ्ग पहिचान गर्ने गरेको सुनिन्छ ।
लिङ्ग पहिचानले गर्भवती महिला तथा परिवारलाई मानसिक तनाव दिन सक्ने भएकाले बच्चाको गडबडीको बारेमा उल्लेख गरे पनि ‘लिङ्ग’ भन्न नहुने कानुनी मान्यता रहेको छ । नेपालमा २ हजार देखि ५ हजार सम्म शुल्क लिएर लिङ्ग पहिचान गर्ने गरेको कतिपय रेडियोलोजिष्टहरुले पनि स्वीकार गर्छन् ।
नेपालमा १२ हप्तासम्मको जुनसुकै गर्भ सुचिकृत संस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार गर्भवती महिलामा रहे पनि लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन नपाउने स्पष्ट कानुन रहेको छ ।
समान्यतयाः लिङ्गको पहिचान गर्दा गर्भको अवधि १२ हप्ता भन्दा बढी भइसकेका कारणले पनि छोरा वा छोरी पत्तालागिसके पछि गर्भपतन गर्न नपाउने हुन्छन् । तर, यो केवल कानुनमा र पहुाच नभएकाहरुका लागि मात्र लागु हुन्छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या ठूलो छ । यसरी लिङ्ग पहिचान गरेर आएकाहरुलाई गर्भपतन गराएका कारण केहि चिकित्सकहरुको नाममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरीसमेत परेको छ । ती उजुरीहरु माथि अनुसन्धान भइरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जानकारी दिएको छ । तर, लिङ्ग पहिचान गराउन तथा गर्भपतन गराउन किन बाध्य छन् नेपालीहरु ? यसतर्फ कसैले सोच्न सकेको छैन ।
छोरी नचाहेको अवस्थामा छोरी जन्माउनु पर्दा सुत्केरी आमाले भोगेका समाजिक तथा मानसिक पिडा र उनका ती अबोध बालिकामाथि गरिने दुर्ब्यवहार अझै पनि हाम्रो समाजमा रहेको छ । अझै पनि पिण्ड अनि बुढेसकालको सहाराका लागि छोरा चाहिने मान्यता हाम्रो समाजमा छ ।
जागिरे दम्पतीहरु समय मिलाएर सन्तान जन्माउन चान्छन्, तर त्यो सन्तान छोरा नै हुनुपर्ने सोच बनाउछन् । अनि लिङ्ग पहिचान र गर्भपतनका लागि जायज वा नाजायज मार्ग खोज्ने गर्छन । त्यसैले यस किसिमको गर्भपतन स्वास्थ्य भन्दा पनि समाजिक समस्या भन्दा फरक नपर्ला ।
छोरीको अधिकार सुनिच्ति नगरिए सम्म वा छोरामा आश्रति रहने परम्परा अन्त नभए सम्म यस्ता गर्भपतन रोक्न सकिएला त ? गर्भमा रहेको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न गर्भपतनमा रोक लगाएर मात्र पुग्छ कि पुग्दैन ? एउटा दक्ष चिकित्सकलाई गर्भपतन गर्न रोक्न सकिन्छ ।
तर गर्भपतन गर्न रोक्न सकिन्छ ? नेपालमा रोके भारत जाने क्रम नबढ्ला भन्न सकिन्न । नेपालका योग्य एवं दक्ष चिकित्सकहरुले यो सेवा नदिए भारतमा रहेका केन्द्रहरुमा तथा हाम्रै मुलुकका असुरक्षित स्थानहरुमा नेपाली दम्पतीहरु नलुटिने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? सबभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य त छोरी जति सबै गर्भपतन गर्दै जाने हो भने सामाजिक सन्तुलन कसरी कायम रहला ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु हामी माझ रहेको छ ।
त्यसैले गर्भपतनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै यस्ता सामाजिक र संस्कृतिक वाध्यताहरुको अन्त गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।